किन केटाहरू ‘आन्टी टाइप’का महिलाहरू मन पराउँछन् ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ बिबिध/किन केटाहरू ‘आन्टी टाइप’का महिलाहरू मन पराउँछन् ?
नायिका श्वेता खड्काले केहि महिना पहिला निकै कान्छा युवकसँग बिवाह गरिन् । त्यस्तै अभिनेत्री प्रियंका कार्की नायक आयुष्मान देशराज जोशीबिच बिवाह भएसकेको छ ।
यो पनि थाहा भएकै कुरा हो कि, प्रियंका भन्दा आयुशमान उमेरले कान्छो छन् । अब अर्की प्रियंका अर्थात बलिउड अभिनेत्री पि्रयंका चोपडाको कुरा गरौं ।
यी अविवाहित अभिनेत्री अहिले आफुभन्दा निकै कम उमेरकै युवासँग डेटमा छिन् । बलिउड एवं हलिउडकी नायिका प्रियंका चोपडा आकाश अंबानी र श्लोका मेहताको मंगनी (इंगेजमेन्ट) समारोहमा आना कथित ब्वायफ्रेन्ड निकी जोनाससँग पुगिन् । यी दुईले बिवाह नै गरे । यी दुईको उमेरमा दस वर्षको फरक छ ।
२५ वर्षे अमेरिकी गायक निकी जोनासले प्रियंकाभन्दा पहिला थुप्रै सँग डेट गरेका थिए जसमध्ये अधिकांश उनीभन्दा जेठा थिए । यसरी सम्बन्ध राख्ने सेलिब्रेटीहरू बलिउड एवं हलिउडमा थुप्रै छन् ।
हामीकहाँ विवाहको कुरा गर्दा पुरुषभन्दा कम उमेरकी दुलही खोजिन्छ । यसको धार्मिक, समाजिक, मनोवैज्ञनिक पक्ष के छ ? त्यसतर्फ नलागौं । यद्यपी पुरुषले आफ्ना जोडीको रुपमा कम उमेरकै महिला खोज्ने गर्छन् । अधिकांश दम्पतीलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरुमा पतिको भन्दा पत्नीको उमेर कम पाइन्छ ।
केटाहरू आफूभन्दा बढी उमेरका महिलाप्रति आकषिर्त हुन्छन् त ?
कुरा गर्ने तरिका : बढी उमेरका महिलासँग कुराकानिका टपिक पनि धेरै हुन्छन् । अनुभवका कारण उनीहरू ब्यूमटी विथ माइन्ड हुन्छन् । आˆनो दिमाग केवल सुन्दर देखिन र सपिङ्ग गर्नमा मात्र खर्च गर्दैनन्, बरु उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने तथा कुराकानीलाई रमाइलो बनाउने अनेक तरिका हुन्छन् । उनीहरूले सार्वजनिक स्थलमा पनि आफूलाई रिप्रजेंट गर्न जानेका हुन्छन् ।
कस्तो नाइटो भएका म’हिलाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन श्रीमान् र बै’वाहिक जीवनमा ते’स्को कस्तो प्र’भाव पर्छ